Mugabe's Nephew Under Fire Over Failed Harare Water Project - allAfrica.com
The late former president Robert Mugabe's nephew, Leo Mugabe, has failed to complete the Oddis Plant project his company was long contracted to work on by the Harare City Council, Mayor Herbert Gomba has said, claiming Mugabe was paid for the job in the 1990s. Gomba has threatened to report the matter to the Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
New Zimbabwe, 17 October 2019
LATE Former President Robert Mugabe's nephew, Leo Mugabe is under fire over failure to complete the Oddis Plant project his company and some Israelites were long contracted to work… Read more »
New Zimbabwe, 14 October 2019
Government Friday ordered the Harare City Council and other local authorities to abandon all the tenders they had been using to procure water treatment chemicals. Read more »
New Zimbabwe, 7 October 2019
Some corrupt individuals are taking advantage of the current water shortages being experienced in most urban councils and have taken control of boreholes where they charge a fee… Read more »
VOA, 24 September 2019
Zimbabwe's capital has closed its water plant due to lack of funds to purchase water treatment chemicals, forcing residents to rely on open and untreated water sources. Read more »
Zimbabwe: 'Mnangagwa Has Set Makorokoza On Mugabe's Farm'
Former President and now late Robert Mugabe's nephew and ex-Cabinet Minister Patrick Zhuwawo has accused President Emmerson Mnangagwa of setting illegal gold panners on his… Read more »
The Harare City Council says it will be able to supply water to the Zimbabwean capital for seven days. The council shut down the Morton Jaffray water treatment plant on Monday due ... Read more »
Zimbabwe: Harare Secures Water Enough for One Week
Harare has embarked on a massive water-disconnection drive targeting non-paying residents, a decision feared to have serious health implications as the city is battling a surge in ... Read more »
Zimbabwe: Council Disconnects Non-Paying Water Users
Zimbabwe: Zimbabwe Crisis Deepens Under President Emmerson Mnangagwa